Ciidamadda Ammaanka oo soo afjaray Weerarkii Pizza House + Sawiro+Muuqaalo – Hornafrik Media Network
Hawlgal socday illaa iyo xalay ayeey ugu dambayntii Ciidamadda Gaashaan ku guulaysteen inay saaka soo afjaraan Weerarkii Argagixisanimo ee Maqaayadda Pizza House. Waxayna wararka aan ka helayno halkaasi sheegayaan in gabi ahaanba la laayay Kooxdii Weerarkii soo qaaday.
inta la xaqiijiyay waxaa Goobtaasi ay ku dileen Argagixisaddu 20 Qof oo Rayid ah iyo 30 dhaawac ah. waxaana Dadka goobta lagu laayay ka mid ah Gabdho Da’yar. waxaa hal goob is dul saarnaa Maydadka 6 Gabdhood oo Dhalinyaro oo ay dileen Kooxda Weerarka soo qaaday. Waxaa sidoo kale la arkayay Wiilal dhalinyaro ah oo ay si arxan darro ah u dileen Kooxdan Weerarka gaystay.
intii uu hawlgalku socday waxaa ku dhintay 2 Askari oo NISA ka tirsan oo ka mid ahaa Ciidankii badbaadinayay Shacabka. Waxaa sidoo kale jira Askar kale oo dhaawacmay.
Gud Ku Xigeenka Aqalka Sare ee Somalia, Abshir Bukhaari ayaa ka mid ah Dadka laga soo badbaadiyay Goobta ay wax ka dhaceen. Waxaana uu u xaqiijiyay Hornafrik mar ay la xiriirtay inuu bad qabo.
Weerarkan oo ay sheegteen Kooxda Alshabaab dhamaan dadka ku waxyeeloobay waa Shacab. Waxayse Kooxda Alshabaab sheegatay inay ku laayeen Saraakiil Ciidan.
Waalidiin badan oo Caruurtooda ay ku jireen Dadka ku waxyeeloobay ayaa goobta soo buuxdhaafiyay waxaana la arkayay iyagoo barooranaya. Waalidiinta qaarkood ayaa suuxay markii ay arkeen Caruurtoodii oo Goobta lagu laayay. iyadoona Saaka ay Maqaayadda Pizza House ka jirto Qaracan xooggan oo ka dhashay wixii xalay dhacay.
Dawladda Somalia ayaa ka tacsiyaysay Weerarkaasi.